तपाई डरलाग्दा सपना देख्नुहुन्छ ? यस्तो छ कारण - Kathmandu Patra
Home Features तपाई डरलाग्दा सपना देख्नुहुन्छ ? यस्तो छ कारण
तपाई डरलाग्दा सपना देख्नुहुन्छ ? यस्तो छ कारण
मानिसहरू सपना देख्छन्, कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो अर्थात् डरलाग्दो । डरलाग्दो सपना देखेपछि मानिस पसिना–पसिना भएर ब्युँझन्छन् पनि । तर, त्यस्ता डरलाग्दा अथवा नराम्रो सपना बिरामी हुने संकेत पनि हुन सक्ने वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्. । कहिलेकाहीँ नराम्रा सपना रोगको लक्षण देखिनुभन्दा धेरै अघि पनि देखिन सक्छ ।
यस्तै, अनिद्राको समस्या भएका मानिसले पनि नराम्रा सपना देख्छन्, यस्तो अवस्थामा केही क्षणका लागि श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या आउन सक्छ । स्वास्थ्य खबरपत्रिका नियमित नराम्रा सपना मुटुको समस्यासंग पनि गाँसिएको हुन्छ । अन्य मानिसभन्दा नराम्रा सपना देख्ने मानिसमा मुटुको चाल अनियमित हुने समस्या तीन गुणा बढी हुन्छ भने छाति दुख्ने समस्या सात गुणा बढी हुन्छ । मुटुको समस्या आउँदा फोक्सोमा पानी जम्ने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा श्वासप्रश्वासमा समस्या आउछ ।
Previous articleजीवनसाथी बनाउँदै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यी पाँच कुरा भुलेर नि नबिर्सनुहोला
Next articleहोसियार, तपाई बिहान उठ्ने बित्तिकै यी चार कुरा खाने गर्नु भएको त छैन ?